စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးစာပိုဒ်တိုများ - Self Help အရင်းအမြစ်များ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ (စာမျက်နှာ ၂)
ယောဂနှင့်ပတ်သက်သောဤလှုံ့ဆျောမှုပေးသောစကားစုမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဆုံးဖွတျခကျြမဟုတျပါ၊ ရှာတွေ့သည်!
ငြူစူခြင်းဟူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဒုက္ခရောက်စေသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုစီမံရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤစာပိုဒ်တိုများက၎င်းကိုသင်အောင်မြင်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်ခရီးသွားလိုသည်ဖြစ်စေ၊ မသေချာမရေရာမှုဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေ၊ လုပ်ရန်အဘယ်ကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသည်ကိုနားလည်ရန်ဤစကားစုများကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်။
ဘ ၀ ၏အပြုသဘောဆောင်သောစာပိုဒ်တိုများ
ဘဝ၏အပြုသဘောဆောင်သောစာပိုဒ်တိုများကသင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်စွာခံစားရရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ ဒီ ၃၆ လုံးကိုသင်ကိုယ်တိုင်မထားပါနဲ့။
သင့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့်အဘိုးအဘွားတွေအတွက်ရည်ညွှန်းဖို့အတွက်စကားစု ၁၀ ခု
ခမည်းတော်၏နေ့အတွက် 25 စာပိုဒ်တိုများ
ဖခင်များနေ့သည်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်အထူးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကိုထိုလှပသောစကားစုများထဲမှတစ်ခုဖြင့်မြှုပ်နှံပါ။ မင်းကိုချစ်မယ်
မင်းကိုကူညီနိုင်မယ့်အထီးကျန်စကားစု ၃၀ ပါ
အထီးကျန်ခြင်းသည်သင့်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ အဲဒါကသင့်ကိုကူညီသလား၊ ဒီအထီးကျန်စကားစု ၃၀ ကသင့်ကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။
သင့်ကိုပြုံးပြရန်တစ်စုံတစ်ယောက်လိုအပ်ပါသလား။ မင်းရဲ့တစ်နေ့တာလုပ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ရယ်စရာစကားစုတွေကိုလာပြီးဖတ်ပါ။ အဲဒါကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့
သင့်သူငယ်ချင်း၏မွေးနေ့သည်လာမည်။ သင်ဘာကိုအထူးပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်မသိပါကဤမွေးနေ့ ၂၅ ခုကိုမမေ့ပါနှင့်။
စိတ်၏စွမ်းအား - စဉ်းစားရန် +30 စာပိုဒ်တိုများ
သင်၏အတွေးအမြင်၏စွမ်းအားသည်မည်သည့်စွမ်းအားမည်မျှရှိသည်ကိုရှာဖွေပါ။ ၎င်းသည်သင်နှင့်ဘဝနှင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုထင်ဟပ်စေမည့်စာပိုဒ်တိုများရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့သိကျွမ်းဖို့မေးခွန်း ၆၅ ခု
အလုပ်အကြောင်း 45 စာပိုဒ်တိုများ
အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောဤစကားစု ၄၆ ခုကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
Seneca သည် Stoic အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်သင့်ကိုထင်ဟပ်စေမည့်သူ၏အကောင်းဆုံးစကားစုများ၏ +30 ကိုစုဆောင်းထားသည်။
သင်၏တောက်ပစေရန်နှင့်နေ့စဉ်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုမည့်ဤလှပသောတိုတိုတိုစကားလုံးများကိုမမေ့ပါနှင့် ... သူတို့ကိုသင်ချစ်တော့မည်။
မဖြစ်နိုင်တဲ့အချစ်၊ မဖြစ်နိုင်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားရတဲ့သူများစွာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီစာပိုဒ်တိုတွေကိုမျှဝေချင်ကြတယ်။
မျက်မြင်မရဖြစ်ခြင်း၏အားသာချက်များမှာသင့်ကိုလည်းလည်းစွန့်ခွာမသွားနိုင်သောဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ၏ဘ ၀ အကြောင်းဝတ္ထုကိုအခြေခံသည့်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
နေ့ကိုတက်အသက်ဝင်ရန် 52 စာပိုဒ်တိုများ
နေ့ကိုခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးစရာမလိုပါ၊ တကယ်တော့၊ အကယ်၍ သင်သည်ဤစာပိုဒ်တိုများကိုရေးပြီးမီးခိုးရောင်တွင်ဖတ်လျှင်၊
Patricio Rey နှင့်သူ၏ Redonditos de Ricota တို့၏ကျော်ကြားသောစာပိုဒ်တို ၂၉ ခု
သင်အာဂျင်တီးနား Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota မှအခြားရွေးချယ်စရာရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့ကိုသိခဲ့သလား။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုသူphrasesကန်အမှန်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်, သူ၏ထားသောစာပိုဒ်တိုများအချို့ကိုဆောင်ခဲ့
31 Kaleth Morales အားဖြင့်လှပသောစာပိုဒ်တိုများ
Kaleth Morales သည်ကိုလံဘီယာနှင့်ပီရူးတို့တွင်ကျော်ကြားခဲ့ပြီးဆေးပညာကိုလေ့လာခြင်းအပြင်သူသည်အဆိုတော်နှင့်တေးရေးဆရာလည်းဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုသူ့စကားစုအချို့ကိုပြောပြပါ။
John Fitzgerald Kennedy ၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၄၀
JFK သို့မဟုတ်သမ္မတကနေဒီဟုလည်းလူသိများသော John Fitzgerald Kennedy သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သူ၏စံနမူနာများကြောင့်များစွာကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ သူ၏စကားစုအချို့ကိုရှာဖွေပါ ...
မက္ကဆီကို၏လွတ်လပ်ရေး၏အကောင်းဆုံး 46 စာပိုဒ်တိုများ
လွတ်လပ်ရေးမက္ကဆီကို၏လွတ်လပ်ရေးသည်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ပြည်သူလူထု၏ဘ ၀ ကိုထာဝရပြောင်းလဲစေခဲ့သောသမိုင်းအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်ကိုထင်ဟပ်စေမည့် Thales of Miletus မှစာပိုဒ်တိုများ
နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ။ နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ကြသော Thales of Miletus မှဤစကားစုများကိုလက်လွတ်မသွားပါနှင့်။ ၎င်းတို့သည်ယနေ့တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
"Thirty, Fantastic Single" ၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၂၅ ခု
မက္ကဆီကို "Treintona, Soltera Fantástica" ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးလား။ ၎င်းသည်သင်ဘဝနှင့်သင်၏independenceတ္ထိလွတ်လပ်မှုကိုထင်ဟပ်စေသောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
“ ဘဝသည်လှပသည်” သင်၏စိတ်ကိုအမြဲတမ်းထိမိသောရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏အကောင်းဆုံးစကားစုအချို့ကိုမလွတ်ပါစေနှင့်၊ သင့်ကိုလျစ်လျူရှုထားမည်မဟုတ်ပါ။
Johnny Deep သိလား သူသည်အနုပညာရှင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ ဂီတပညာရှင်၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူဖြစ်သည်။ သူသည်ဟောလိဝုဒ်ကမ္ဘာမှလူသိများသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏စကားစုအချို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
Pxndx ၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၃၀
မက္ကဆီကန်ပေါ့ပ်ရော့ခ် PXNDX သိလား။ သူတို့ဟာဂီတလောကမှာမရှိတော့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့သီချင်းတွေကိုနောက်လိုက်တွေနှစ်သက်ကြပါတယ်။
နှလုံးနှင့်စိုးလ်ကိုထိသော 49 စာပိုဒ်တိုများ
သင်၏နှလုံးကိုထိ မိ၍ သင်၏စိတ်ကိုထိမိစေမည့်ဘဝကဏ္aspectsများအကြောင်းပြောပြသည့်ဤစကားစု ၄၉ ခုကိုလက်မလွတ်ပါစေနှင့်။
နောက်ပြီး Ciro y los Persas မှအာဂျင်တီးနားဂီတအဖွဲ့၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၅၀ ကိုချန်ထားသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဖြစ်ပြီးသူတို့၏သီချင်းများကိုသင်နားထောင်လိုလိမ့်မည်။
အကယ်၍ မင်းသည်“ စိတ်ကိုထာဝရအမှတ်ရစရာမရှိဘဲအမှတ်ရစရာမရှိဘဲ” ရုပ်ရှင်ကိုသင်မသိရလျှင်သင့်အားမြင်ချင်စေရန်စကားစုအချို့ကိုချန်ထားသည်။
မက္ကဆီကန်ရက်ပ်အဆိုတော် Gera MxM သင်သိသလား။ သငျသညျသူ့ကိုမသိလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုသူ့သီချင်းတွေထဲမှာပေါ်လာသောစာပိုဒ်တိုများအချို့ကိုတင်ပြသွားကြသည် ...
ချားလ်စ်အန်း၏ ၃၁ အကောင်းဆုံးစကားစု
မက္ကဆီကန်ရက်ပ်ချားလ်စ်အဲန်စ်ကိုခင်ဗျားသိလား သူ၏သီချင်းစာသားများသည်လူငယ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ သူ၏စကားစုအချို့ကိုလက်လွတ်မခံပါ။
သေလွန်သောသူတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအက္ခရာ၏ 31 စာပိုဒ်တိုများ
“ သေလွန်သူများကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာပေးစာ” သည်လူငယ်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ သင်ဖတ်သည့်အခါသင့်ကိုလျစ်လျူရှုမည်မဟုတ်။ ၎င်း၏စာမျက်နှာများမှထုတ်ထားသောဤစကားစုများကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်။
၃၁ Spider-Man ကိုးကားချက်များ၊ Spider-Man ကသင့်ကိုစဉ်းစားစေလိမ့်မည်။
သငျသညျကာတွန်းနှင့်စူပါဟီးရိုးလောက၏ကမ္ဘာကြီးကိုကြိုက်လျှင်, သင်ကပင့်ကူလူသို့မဟုတ် Spiderman ကိုသိထက်ပို။ ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုသူ၏စာပိုဒ်တိုများအချို့ထားခဲ့ပါ!
"ငါ့မင်းသမီး၏မျက်စိ" စာအုပ်မှ 38 စာပိုဒ်တိုများ
မင်းသမီးမင်းသမီးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဖတ်ဖူးလား။ သင့်အားချစ်ခြင်းမေတ္တာမျက်နှာများကိုစဉ်းစားစေမည့်ရှုထောင့်မှကြည့်။ အချစ်နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်တစ်အုပ်။
León Larregui ၏အကောင်းဆုံးစကားစု (၄၁) ချက်
León Larregui ၏အကောင်းဆုံးစကားစုကိုသင်သိသောအခါသူသည်သူ၏ဂီတနှင့်သူ၏သီချင်းစာသားများကိုနားထောင်လို။ ၊ ဘာကြောင့်လဲသိချင်ပါလိမ့်မည်။
ဘဝသင်ခန်းစာများနှင့်ပတ်သက်။ 41 စာပိုဒ်တိုများ
အဲလစ်ဇဘက်အီလက်ဘက်သည်“ သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ပါကဘာဖြစ်မည်နည်း” စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့သည်။ သင်ချစ်မြတ်နိုးရမည့်အလွန့်အလွန်ကောင်းသောစာအုပ်တစ်အုပ် ... ငါတို့၏အချို့သောစာပိုဒ်တိုများကိုကျွန်ုပ်တို့ချန်ထားခဲ့သည်
ဘဝအကြောင်းကိုထင်ရှားသောဒphilနပညာရှင် ၅၅ ပုဒ်
သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးမည့် Ezequiel Zamora မှစကားစု ၃၂ ခု
Ezquiel Zamora သည်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှလူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူနေထိုင်စဉ်ကသူ့လူမျိုးအတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သူ၏စကားစုအချို့ကိုသင်ပြောပြပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာသူ၏အစွမ်းသည်မည်မျှပြင်းထန်ကြောင်းသင်မြင်နိုင်မည်။
Robert Baden Powell မှ 45 စာပိုဒ်တိုများ
သင်ဟာ“ ကင်းထောက်” အဖွဲ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖူးပါသလား။ ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှုများ၎င်းတို့၏တည်ထောင်သူ Robert Baden Powell မှကျေးဇူးတင်စကားတည်ရှိ။
၅၉ Flash ဂေါ်ဒွန်ကိုးကားချက်များနှင့်အခြားအရာများ
သူရဲကောင်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက Flash Gordon ၏ဇာတ်ကောင်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုသူ့စကားစုအချို့ကိုပြောပြပါ။
48 Timothy Ferriss သည်သင်တွေးသောလမ်းကိုပြောင်းလဲစေမည့်ကိုးကားချက်များ
Timothy Ferriss အကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့စကားစုတွေကိုသိဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ သင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါလိမ့်မယ်။
နယူးယောက်ရှိလိင်၏ 37 စာပိုဒ်တိုများ
နယူးယောက်ရှိလိင်သည်အလွန်လူကြိုက်များသောအခန်းဆက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခန်း ၆၄ ခုတွင် ၆ ကြိမ်ကျော်ပြန့်နှံ့နေသောအခန်း ၉၄ ခုထက်မကပါဝင်သည်။
"I want you" ရုပ်ရှင်မှ 33 စာပိုဒ်တိုများ
"ငါနင့်လိုခံစားရတယ်" ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုသင်သိသလား။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုတို့သည်အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည့်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့် Toy Story စာပိုဒ်တိုများ
Toy Story ရုပ်ရှင်များကိုသင်မြင်ဖူးပါကဤစကားစုများသည်သင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ သင်ရုပ်ရှင်၏အချိန်ဇယားများကိုမှတ်မိရန်သင်နှစ်သက်သည်။
သင်ဤလူကြိုက်များစုံထောက်သိလား ရှားလော့ဟုမ်းစ်သည်နာမည်ကြီးစိတ်ကူးယဉ်စုံထောက်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏စကားစုကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်
"စက္ကူမြို့ကြီးများ" ၏အကောင်းဆုံး 44 စာပိုဒ်တိုများ
“ Paper Towns” ၏ဝတ္ထု (၂၀၀၈) သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင် (၂၀၁၅) ကိုသင်မသိလျှင်၊ ဤစာကြောင်းကိုသင်ဖတ်ရှုသောအခါသင်သိလိုပေမည်။
မက်စ်လူးကားဒို၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၃၄ ခု
မက်စ်လူးကားဒိုဆိုတာဘယ်သူလဲသိလား သူပြောသောအတွေးများအတွက်သန်းပေါင်းများစွာသောနောက်လိုက်များရှိသောခရစ်ယာန်ဟောပြောသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူထင်သလောက်မကြိုက်လား?
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနားလည်ရန် Walter Riso မှစာပိုဒ်တို ၅၀
Walter Riso ၏ဤစကားစုများသည်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများအပေါ်ထားရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အဆိပ်မဖြစ်စေရန်မည်မျှချစ်သင့်သည်ကိုနားလည်စေလိမ့်မည်။
သင်၏ဝိညာဉ်ကိုကျွေးမွေးရန် Jack Canfield မှ ၄၁ စကားလုံး
Jack Canfield သိလား သူကလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပြည့်မီအောင်လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အမေရိကန်စပီကာနဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့စကားစုတွေကလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပါ။
မနက်တိုင်းနံနက်တိုင်းသဘာ ၀ အတိုင်းသဟဇာတဖြစ်ခြင်းကိုပျော်ရွှင်စွာနိုးထရန်နည်းလမ်းကောင်းမရှိပါ။ တစ်နေ့တာကိုအပြုသဘောဖြင့်စတင်ရန်ဤစကားစု ၅၀ ကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်။
"Corpse Bride" သည်ကလေးများသာမကလူငယ်များနှင့်လူကြီးများပါနှစ်သက်သောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုရုပ်ရှင်ထဲကနေစကားစုအချို့ကိုချန်ထားသည်။
55 သင့်ကိုထင်ဟပ်ပြသရန်ကူညီပေးမည့် Victor Hugo မှစာပိုဒ်တိုများ
ဗစ်တာဟူဂို၏စကားစုများသည်မည်သူ့ကိုမျှလည်းလည်းချန်မထားခဲ့ပါ။ သူသည် ၁၉ ရာစု၏ထူးချွန်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏လက်ရာများကြောင့်ယနေ့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
အကယ်၍ ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်“ Pride and Prejudice” ဝတ္ထုကိုသင်သိလျှင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားရစေသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဤစကားစု ၃၅ ခုကိုမလွတ်ပါနှင့်။
30 Sheldon Cooper ကကိုးကား
The Big Bang Theory ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကိုခင်ဗျားမြင်ဖူးရင် Sheldon Cooper ဆိုတာမင်းသိမှာပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုသူ၏အကောင်းဆုံးထားသောစာပိုဒ်တိုများအချို့ထားခဲ့ပါ။
45 Rumi စကားစုကမင်းဘဝကိုပြောင်းလဲပုံကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်
Yalal ad-Din Rumi ဆိုတာဘယ်သူလဲသိလား။ သူ၏ကဗျာနှင့်သူ၏ဉာဏ်ပညာအကြောင်းသင်တစ်ခါမျှမကြားဖူးပါကထိုစကားစုများမှတဆင့်သူ့ကိုသင်သိရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုရှင်သန်စေမယ့်အတိတ်ကစာပိုဒ် ၅၅ ခု
အတိတ်သည်ဘယ်တော့မျှပြန်လာမည်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကို ကျေးဇူးတင်၍ သင်ပစ္စုပ္ပန်၌အသက်ရှင်ရန်သင်ယူရမည်။ ဤစာပိုဒ်တိုများဖြင့်အတိတ်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်သင်သင်ယူနိုင်သည်။
Isabel Allende မှစာပိုဒ် ၄၀ ကိုသင်ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး
Isabell Allende သည်ကျော်ကြားသောစာရေးဆရာနှင့်ချီလီ - အမေရိကန်သတင်းစာဆရာလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သင့်အားရောင်ပြန်ဟပ်စေမည့်စကားစုများစွာပါရှိသည်။
သင့်အားနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်စေမည့်လွမ်းဆွတ်ဖွယ်စကားစု ၄၅ ခု
လွမ်းဆွတ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေရသောအရာများ၊ အချိန်များသို့မဟုတ်လူတို့အတွက်အချို့သောဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုကိုခံစားရစေသည်။ ဒီစကားစုတွေကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့ ...
ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စိတ်ဝိညာဉ်၏ 50 စာပိုဒ်တိုများ
ဒီအပုဒ် ၅၀ ကသင့်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားစေပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်သင်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ထိတွေ့စေပြီးသင့်ဘဝကိုထင်ဟပ်စေလိမ့်မည်။
စကြာ ၀ soာသည်အလွန်ကြီးမားလွန်းသဖြင့်၎င်းကိုစဉ်းစားကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည်ဟုခံစားရသည်။
Snoopy သည်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပြီးသူ၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအနှစ် ၅၀ ကျော်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ မင်းကိုစဉ်းစားစေမယ့်သူ့ရဲ့စကားစုတွေကိုမလွတ်ပါစေနဲ့။
စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်တွေဟာစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ဘယ်တော့မှမတည်ရှိတော့မယ့်အဖြစ်မှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားစုတွေကသင့်ကိုပိုကောင်းလာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်။
Rhonda Byrne မှ "The Secret" မှ 45 စာပိုဒ်တိုများ
လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသင်ဖတ်ပြီးပြီလား။ မင်းထင်မြင်ချက်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်မလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ မင်းရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲစေမယ့်စကားစုအချို့ကိုသင့်ကိုချန်ထားပါတယ်။
Arthur Schopenhauer သည်တွေးခေါ်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏အတွေးများကိုမည်သူမျှလည်းလည်းချန်မထားခဲ့ပါ။ ဒါ့ကြောင့်သူ့ကိုခင်ဗျားပိုသိအောင်လုပ်ပါမယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုယုံကြည်လာစေမယ့်အချစ်ဇာတ်လမ်း ၃၅ ခု
Jiddu Krishnamurti သိလား။ သူသည်ဘဝနှင့်ဖြစ်တည်မှုအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးသူ၏အတွေးအခေါ်များကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပုံသွင်းခဲ့သည့်ကောင်းမွန်သောတွေးခေါ်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သန်းကြွယ်သူဌေးများပြောခဲ့သည့်ဤစကားစုများကိုမမေ့ပါနှင့်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်အောင်မြင်မှုသည်မတော်တဆမှု၏ရလဒ်မဟုတ်ကြောင်းကိုသင်စဉ်းစားစေလိမ့်မည်။ သင်ကံကြမ္မာ၏စွမ်းအားရှိသည်။
အကယ်၍ သင်က anime စီးရီး Dragon Ball ကိုသိလျှင် Goku သည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။ နောက်ဇာတ်ကောင်ပြောသောဒဏ္icalာရီစကားစုအချို့ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
25 ဖောရက်စ Gump ကိုးကား
အခြားရုပ်ရှင်တွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားမှုကိုလုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုရှိရင်၊ ဖောရက်စ်ဂမ်ဖ်ဖ်ပါ။ ရုပ်ရှင်ထဲကဒီစကားစုတွေကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့။
သင့်ကိုလျစ်လျူရှုစရာမလိုတဲ့ Eminem ကိုးကားချက်များ
Rap ဂီတနှင့် hip-hop ကိုအာရုံစိုက်သည့်သူ၏ဂီတကြောင့် Eminem သည်အောက်ပါအချက်များစွာရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတွင်သူ၌သင်ချစ်ရမည့်ကောင်းသောလိုင်းများရှိသည်။
35 ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောစကားစုများ - မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချိန်
Twilight Saga နှင့်ဤအချစ်ဇာတ်လမ်းသုံးခုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကခြွင်းချက်မရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသင့်အားယုံကြည်စေမည့်ဤစကားစုများကိုမလွတ်ပါနှင့်။
ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ဘ ၀ တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုမည်သို့ကောင်းစွာယူရမည်ကိုသင်သိသလောသို့မဟုတ်သူတို့ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဤစာပိုဒ်တိုများဖြင့်၎င်းတို့ကိုမည်ကဲ့သို့ ဦး စားပေးသင့်သည်ကိုသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။
ဝမ်းနည်းကြောင်းကမ်းလှမ်းဖို့ဝမ်းနည်းကြောင်း၏ 33 စာပိုဒ်တိုများ
ချစ်ရသူတစ် ဦး ကွယ်လွန်သွားသည့်အခါအားပေးစကားပြောစရာမလိုပေ။ ဤစာပိုဒ်တိုများဖြင့်သင်ခက်ခဲသောအချိန်တွင်ဘာပြောရမည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။
Charles Bukowski သည်အခြားသူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏အတွေးအခေါ်နှင့်ဘ ၀ ကိုမြင်တွေ့ရပုံကသင့်ကိုလျစ်လျူရှုမည်မဟုတ်။
သင်၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေမည့်သြတ္တပ္ပစိတ် ၃၅ စောင်
သူ၏နောက်လိုက်များမှပြုလုပ်သောအကောင်းဆုံး Chuck Norris ကစာပိုဒ်တိုများ
Chuck Norris ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်သူ၏နောက်လိုက်များတီထွင်ထားသောဤစာပိုဒ်တိုများကိုဖတ်ခြင်းသည်ကောင်းသည်။ သူ၏အရေးပါသောစွမ်းအားကိုပြသည်။
Carl Jung သည်သူ၏အတွေးများနှင့်စိတ်ပညာအတွက်အမွေအနှစ်တစ်ခုကျန်ခဲ့သည်။ ဤစာပိုဒ်တိုများဖြင့်သင်၏ဘဝအပေါ်သင်၏ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့်သေဆုံးသွားသော ၁၃ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏ထင်မြင်ချက်များကိုဖတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ သူ၏စကားစုများသည်သင့်ကိုလျစ်လျူရှုထားမည်မဟုတ်ပါ။
31 အားဖြင့် Alejandro Jodorowsky ပါ
Alejandro Jodorowsky ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကသင့်ကိုလျစ်လျူရှုထားမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဘဝ၌အရာရာကိုကွဲပြားစွာမြင်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
တားမြစ်ထားသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသောချစ်သူများ ၅၅ ပုဒ်
အကယ်၍ သင်သည်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး နှင့်တားမြစ်ထားသောစွန့်စားမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေပါကသင်၏နှလုံးသားကိုလှည့်စားနိုင်သောစကားစုအချို့ရှိသည်။ သင်သူ့ကိုချစ်မြတ်နိုးပါသလား။
သင့်နှလုံးကိုထိမိစေမည့်စကားစု ၄၅ ခု
နှလုံးသည်အသက်ရှင်ရန်နှင့်ခံစားရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏နှလုံးကိုထိမိစေပြီးဘဝကိုကွဲပြားစွာသင်ခံစားစေမည့်ဤစကားစု ၄၅ ခုကိုမလွတ်ပါနှင့်။
Abraham Lincoln ၏အံ့ဖွယ်ကိုးကားချက် ၄၅ ချက်
Abraham Lincoln သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၁၆ ယောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်ပြီးကျွန်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏အကြံအစည်များနှင့်လုပ်ရပ်များတွင်ကွဲပြားသည်။ သူ၏ဝါကျကသက်သေပြနိုင်သည်။
Calle 13 သည်သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါသလား။ ၎င်းသည် Puerto Rican ၏မြို့ပြဂီတ၏ဂီတနှစ်လုံးမှာ ...
ရုပ်ရှင်မှစာပိုဒ် ၂၂ ခု - သင်၏အမည် (Kimi no na wa)
သင်၏နာမည်ရုပ်ရှင်ကိုသိပါသလား (kimi no na wa)? သင်ကြည့်လိုက်ရင်မင်းကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး၊ ပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားစုတွေကိုတော့ anime ရုပ်ရှင်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
Pablo Neruda ဆိုတဲ့စကားစုကသင့်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုယုံကြည်စေပါလိမ့်မယ်
အကယ်၍ သမိုင်းတွင်မည်သူမဆိုကျမ်းပိုဒ်များ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမည်သို့ဖော်ပြနိုင်မည်ကိုသိသောသူရှိလျှင် ... ပါပလောနိုရိုဒါသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိ။ သူ၏ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစကားစု ၃၇ ကိုမမေ့ပါနှင့်။
Nezahualcoyotl ၏ 30 စာပိုဒ်တိုများ
Nezahualcoyotl သည်သူ ၁၄၀၂ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားချိန် မှစ၍ သူ၏စကားစုများနှင့်ကဗျာများကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည့်သမိုင်းကြောင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုသင်မသိကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
Pepe Mujica မှသူသည်အခြားသမ္မတတစ် ဦး ဖြစ်ရခြင်းကိုဖော်ပြသည်
ဥရုဂွေးဥက္ကay္ဌဟိုဆေး Mujica အားလည်း Pepe ဟုလူသိများသည်။ သူသည်သူ၏ဘဝကိုမြင်တွေ့ရသည့်အတွက်စံပြသမ္မတဖြစ်သည်။
La 25 မှစာပိုဒ်တိုများ
အာဂျင်တီးနားဂီတအဖွဲ့ La 25 ကိုသင်သိသည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့၏သီချင်းများတွင်သူတို့ပြောသောဤစကားစုများသည်သင့်ကိုနှစ်သက်ပြီးသင့်ကိုထင်ဟပ်စေလိမ့်မည်။
ယောဟန် Lennon ၏ 30 စာပိုဒ်တိုများ
John Lennon သည် The Beatles ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်သော်လည်းတီးဝိုင်းဖျက်သိမ်းလိုက်သောအခါသူသည်သူ၏အတွေးအခေါ်များကြောင့်ပရိသတ်များစွာအတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသည်။
ဘဝကိုထင်ဟပ်စေသောဝမ်းနည်းဖွယ်စကားစု ၄၅ ခု
ဝမ်းနည်းခြင်းကိုမှန်ကန်စွာစီမံနိုင်လျှင်မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ ဒီ 45 ဝမ်းနည်းဖွယ်စာပိုဒ်တိုများသင်ပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
Gustavo Adolfo Bécquerမှစကားစု ၃၀ သည်သင့်အားအထူးခံစားရစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်
သူ၏သက်တမ်းတိုသော်လည်းဂတ်စတာဗိုအဒေါ့လ်ဖိုဘီကေးသည်သူ၏စာပေများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအမွေအနှစ်များစွာကျန်ရစ်စေခဲ့သည်။ သူ၏အကြီးမြတ်သောစာပိုဒ်တိုများ 30 ကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့!
ဘဝကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန် 60 Nietzsche စာပိုဒ်တိုများ
သင့်ကိုလည်းလည်းစွန့်ခွာစရာမလိုတဲ့နစ်ရှ်က်ဒီစကားစု ၆၀ ကိုလက်မလွတ်ပါနဲ့။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား?
အတွေးအခေါ်စကားစုများကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင့်ကိုယနေ့ထင်ဟပ်စေမည့်အကောင်းဆုံး ၅၅ ကိုထည့်သွင်းပြီးရှာဖွေပါ။
Frida Kahlo ဟာရှုပ်ထွေးတဲ့ဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့အနုပညာလက်ရာတွေမှာသူခံစားနေရတာကိုပြသခဲ့တယ် ... သူမပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားစုကသင့်ကိုယနေ့ရောင်ပြန်ဟပ်စေမှာပါ။
အသက် 30 စိတ်ခွန်အားနိုးဘောလုံးကိုးကား
အကယ်၍ သင်သည်ဘောလုံးကိုနှစ်သက်ပါကဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဘောလုံးကိုးကားချက်များကသင်၏ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်သင်၏အတွင်းပိုင်းစွမ်းရည်ကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားရန်ကူညီနိုင်သည်။
သီချင်းများသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုနားထောင်သူများ၏နှလုံးသားကိုဖြည့်သောလှပသောစာသားများရှိသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့်ဤစကားစု ၄၀ ကိုရှာဖွေပါ။
ကြီးမြတ်တန်ဖိုးများသင်ပေးကြောင်း Mafalda အားဖြင့် 40 စာပိုဒ်တိုများ
Mafalda သိလား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်သန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော်လည်းအပြစ်မဲ့သောဟာသကိုဖွင့်ဟရန်တာဝန်ရှိသည်။ သူ၏စကားစုကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်
မင်းဟယ်ရီပေါ်တာကိုကြိုက်လား ထိုအခါသင်ကရုပ်ရှင် Saga ထက်အများကြီးပိုကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်။ ထိုစကားစု ၃၀ သည်သင့်ကိုထာဝရအမှတ်အသားပြုလိမ့်မည်။
အထူးတစ်စုံတစ် ဦး အားကောင်းသောညဥ့်ကိုပြောလိုပါကထိုညနေခင်းစကားစုများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
ဒီချစ်ကြည်ရေးစကားစု ၄၀ ကသင့်ကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသူတိုင်းမှာရတနာရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည်မိသားစုနှင့် ပတ်သက်၍ စကားစုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောစုဆောင်းမှုသည်အကောင်းဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ရန်အတွက်စာပိုဒ်များ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖန်တီးရန် 53 စာပိုဒ်တိုများ
စာရေးသူအမျိုးမျိုးမှရေးသားထားသောခေတ်ကာလအမျိုးမျိုးမှလူများကျော်ကြားသောလူသိများသောငြိမ်းချမ်းရေးစကားစု ၅၃ ခုသည်အထင်ရှားဆုံးသောစကားစုဖြစ်သည်
နှုတ်ဆက်ခြင်းသည်လူသားများဖြတ်သန်းသွားသောအခက်ခဲဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌၊ အကောင်းဆုံးနှုတ်ဆက်စကားစုများကိုတင်ပြပါမည်။
ဒီအမျိုးသမီးတွေကကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်။ ဤဆောင်းပါး၌အချိန်ကာလအကျော်ကြားဆုံးအမျိုးသမီးများ၏စကားစုများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အမျိုးသမီးဖရီဒါမှသည်မာဂရက်သက်ချာအထိ Isabel Allende မှတဆင့်။
သငျသညျစာအုပ်များ၏ထားသောစာပိုဒ်တိုများကြိုက်လျှင်, သင်အကောင်းဆုံး, လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်းကိုချစ်တော်မူမည် စာသားနဲ့ပုံရိပ်တွေမှာပါ။
ဘဝ၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ တိုးတက်မှု၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုးတက်မှုနှင့်အခြားအရာများစသည့်ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားသောသို့မဟုတ်ကျော်ကြားသောအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များထံမှစာပိုဒ် ၁၀၀ ကျော်ကိုရှာဖွေပါ။
ဆရာများ (သို့) ကိုယ်စားပြုသောဇာတ်ကောင်များ၏ဆရာများအတွက်အကောင်းဆုံးအက္ခရာ ၇၇ ခု
ဆရာ / မများသို့မဟုတ်ပါမောက္ခများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပညာရေးအတွက်အခြေခံမဏ္partိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Mario Benedetti သည်ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာနှင့်ပြဇာတ်ရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းသိသင့်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်၌ကူညီရန်နှင့် ...
လူကြိုက်အများဆုံး Steve Jobs ကိုးကားချက်
WhatsApp အတွက်အသုံးအနှုန်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စာရင်းတစ်ခုကိုသင်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီ။ သင်လိုချင်သည့်အချိန်တိုင်းအသုံးပြုရန်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်အမြဲထားနိုင်သည်။
အောင်မြင်မှုရရန်မလွယ်ကူပါ၊ ရှင်းပါသည်၊ ၎င်းမှာကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာလိုအပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ပေးသောအရာအားလုံးထက် ပို၍ လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူကြိုက်အများဆုံးဇာတ်ကောင်များထဲမှနာမည်အကြီးဆုံးသောစကားစုအချို့သို့မဟုတ် ... တစ်ခုအားမှတ်သားထားသောသင့်အတွက်စာရင်းပြုစုထားသည်။
သစ္စာဖောက်မှုဆိုသည်မှာလူတစ် ဦး သည်တစ်စုံတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ်သစ္စာမရှိတော့သောကာလဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်တွေးတောဆင်ခြင်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူရန်အရေးကြီးသည်၊ ထိုနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပို၍ သိကျွမ်းလာကြလိမ့်မည်။
Paulo Coelho ရဲ့အကောင်းဆုံးစကားစု
နာမည်ကျော် Paulo Coelho ရဲ့အကောင်းဆုံးစကားစုတွေပါ ၀ င်တဲ့စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။
လူကြိုက်အများဆုံးပါပလော Escobar ကိုးကား
Bob Marley ၏အကောင်းဆုံးစကားစု
လူတိုင်းသိသည်မဟုတ်။ Bob Marley သည်ဂီတအနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့်အပြင်တွေးတောသူလည်းဖြစ်သည်။
လူကြိုက်အများဆုံး Ghandi စာပိုဒ်တိုများ
Ghandi သည်ယနေ့သူ၏ဘ ၀ အတွေးအခေါ်နှင့်ရုန်းကန်နေစဉ်ကာလအတွင်းလူသိများသောသမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
နံနက်အချိန်၌ထရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကြိမ်များစွာခဲယဉ်းသော်လည်း၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်ထံမှဤစကားစုတစ်ခုခုကိုသင့်အားပြောလျှင် ...
သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်စေပြီးသူမကိုထပ်မံအနိုင်ယူဖို့အတွက်စာပိုဒ်တို ၁၀၃ ခု
အချစ်ဇာတ်လမ်း ၁၅ ခု
အကယ်၍ သင်ဟာအချစ်ဆုံးညနေခင်းတစ်ခုကိုစီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်၊ မင်းဟာအကောင်းဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်းအချို့ကိုသင်တင်ပြသွားမှာပါ။
Frida Khalo ဟာသူမရဲ့ပန်းချီကားများကိုအသိအမှတ်ပြုသောမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ဘ ၀ နှင့်ဝေဒနာကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အလုပ်ဖြစ်တယ် ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၌ခက်ခဲသောအချိန်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါလှုံ့ဆော်မှုရင်းမြစ်ရှာဖွေခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။ သို့သော်…
+100 စိတ်ပျက်စရာနှင့်စိတ်ပျက်စရာ Phrases
လူတွေရှာဖွေလေ့ရှိတဲ့စကားစုအမြောက်အမြားရှိတယ်။ သူတို့ထဲမှာစိတ်ပျက်စရာစကားစုတွေရှိတယ်။ ဘာလဲ ...
သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုမည်သို့ဂုဏ်ပြုနိုင်ကြောင်းစိတ်ကူးရရန်ခရစ်စမတ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကား (သို့) ဥပမာများကိုသင်ရှာဖွေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးကိုဖြည့်ပါ။
အကောင်းဆုံး, ထူးခြားတဲ့မူရင်းနှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်ရယ်စရာမွေးနေ့ပွဲ။ သင်၏သူငယ်ချင်းများ၊ မိဘများ၊ ကလေးများ၊ ဆွေမျိုးများနှင့်အခြားအရာများအတွက်။
အကယ်၍ သင်သည်စဉ်းစားရန်စကားစုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဘဝကဏ္ aspects များစွာအပေါ်ထင်ဟပ်နိုင်သည့်အကြီးမားဆုံးနှင့်မတူညီသောစာရင်းကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
+120 ဗုဒ္ဓဘာသာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောစာပိုဒ်တိုများ
အကယ်၍ သင်သည်မတူညီသောဗုဒ္ဓဘာသာစကားစုများကိုဖတ်ရှုပြီးသင်၏စိတ်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေလိုလျှင်ဤနေရာတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အသိအမြင်ရှိခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့တာ၏စာပိုဒ်များကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်သင်သည်လှုံ့ဆော်မှု၊ တိုးတက်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အားပေးမှုနှင့်အခြားအရာများကိုတွေ့လိမ့်မည်။
သင်သည်ဘဝကဏ္ aspects အသီးသီးနှင့်သက်ဆိုင်သောစမတ်ကျသောစကားစုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကအကောင်းဆုံးသောစာရင်းတွင်သင်ဒီမှာတွေ့လိမ့်မည်။
သင်၏လူမှုကွန်ယက်များဖြစ်သော Instagram, Facebook, Twitter သို့မဟုတ် Pinterest စသည့်ဓာတ်ပုံများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကဤနေရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောစုဆောင်းမှုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
သင်တစ် ဦး ကြမ်းတမ်းသော patch ကိုဖြတ်သန်းသွားသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်လှုံ့ဆော်ဖို့စာပိုဒ်တိုများရှာဖွေနေလျှင်, ဤအပြုသဘောအတွေးများကိုသင်ဘဝအပေါ်လက်ရှိရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်နှင့် ဆက်၍ သွားရန်ကူညီနိုင်သည့်အားထုတ်မှုဆိုင်ရာစကားစုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကဤနေရာတွင်အကြီးမားဆုံးစုစည်းမှုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်သည်ဘဝကဏ္ aspects အသီးသီးကိုစဉ်းစားရန်ဝါကျတိုများကိုရှာဖွေနေပါကကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုတွင် ၁၅၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့ကိုဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
သင်၏ဘ ၀ ကိုတောက်ပစေပြီးအခြားသူများအားနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြသရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုမည့်အပျော်ရွှင်ဆုံးစကားစုများစာရင်းကိုသိကျွမ်းပါ။
သင်ရယ်စရာသို့မဟုတ်ရယ်စရာကောင်းသောရယ်စရာသို့မဟုတ်ရယ်စရာကောင်းသောစကားစုများကိုရှာဖွေနေပါကကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုတွင်၎င်းတို့အနက်အများဆုံးပါဝင်သည်။ လာ။ ခဏတစ် ဦး ရယ်။
အကယ်၍ သင်သည်စိတ်အားတက်ကြွမှုသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုရှိသောစာများပါ ၀ င်သည့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုဆိုင်ရာစာပိုဒ်တိုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုသည်သင်အတွက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဘဝ၊ လူသား၊ မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းစသည့်ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးအကြောင်းသင်စဉ်းစားလိုပါကဤလေးနက်သောစကားစုများကိုသင်အမှန်ပင်ချစ်လိမ့်မည်။
တည်ရှိနေသည့် Little Prince ၏အကောင်းဆုံးစကားစုများကိုသိရှိထားပါ။ ချစ်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ တိုးတက်ခြင်းနှင့်အခြားဘဝကဏ္aspectsများကိုသူတို့နှင့်အတူသင်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။
၁၁၀ Paulo Coelho သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဘဝ၊ ချစ်ကြည်ရေးနှင့်ပိုမိုသောစာပိုဒ်တိုများဖြစ်သည်
Paulo Coelho ၏အချစ်၊ ဘဝ၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ဉာဏ်ပညာ၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်ရုပ်ပုံများနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများပါသည့်အကောင်းဆုံးစကားစုများ။
Instagram အတွက်အကောင်းဆုံးစကားစု ၁၀၀
သင်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများတွင်သင်ထည့်ချင်သော Instagram အတွက်စာပိုဒ်တိုများရှာနေလျှင်ဤနေရာတွင်အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Charles Chaplin သည်သမိုင်းတွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ငါသည်သူ၏အကောင်းဆုံး 15 စာပိုဒ်တိုများတစ်ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူသင်တို့ကိုစွန့်ခွာ။
Bruce Lee မှကိုးကားချက် ၂၀ နှင့် ၄ င်းတို့အပေါ်ထင်ဟပ်မှု ၂၀
သူ၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၂၀ နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့နားလည်သင့်သည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ သည် ပို၍ သာယာဖွယ်ကောင်းသည်။ ရဲ့ကိုယ်ခံပညာချန်ပီယံနားထောင်ကြပါစို့။
The Little Prince »စာအုပ်မှအကျော်ကြားဆုံးသောစကားစု ၄၅ ခု
"မင်းသားလေး" Antoine de Saint-Exupéryရေးသားခဲ့သောလှပသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ သူကလေယာဉ်မှူးတစ် ဦး နှင့် ...
ခက်ခဲတဲ့အချိန် 35 အတွေးများ
ဒီအဖြေ ၃၅ ကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတွေအများကြီးမမြင်ခင်ခင်ဗျားရဲ့စိတ်ကျရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုတိုတိုကိုမြင်စေချင်ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး ၁၀၁ အများဆုံးဝေဖန်နိုင်သောအပြုသဘောအတွေးအခေါ်များ (နှင့်သူတို့၏စာရေးသူများ)
ဒီနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအကောင်းဆုံးအပြုသဘောဆောင်သည့်အတွေး ၁၀၁ ခုရှိသည်။ သူတို့ကလွယ်ကူတဲ့ဝါးမြိုခြင်း၏တိုတောင်းသောအတှေးအဖြစ်ကြသည်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်စုဆောင်းရရှိခဲ့သောပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောထင်မြင်ချက် ၅၀ နှင့်သင်အတွင်း၌ရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုထိတွေ့ပြီးဘဝကိုကွဲပြားခြားနားသောအမြင်ဖြင့်ထိတွေ့ရန်မျှော်လင့်သည်ဟုမှတ်ချက်ပေးသည်။
Winston Churchill ၏စာပိုဒ် ၁၂ ခုနှင့်စပ်စုသော ၄ ချက်နှင့်ထူးခြားချက် (ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံများ)
အချစ်စစ်သည်လူများစွာနားမလည်သောအလွန်လှပပြီးဆန်းကြယ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုလား ...
"ငါ့ဘဝကငါ့ရဲ့သတင်းစကားပဲ။ " မဟတ္တမဂန္ဒီသည် ၂၀ ရာစု၏အထင်ရှားဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ သူ…
ပျောက်ကွယ်သွားသောရေဒီယိုအစီအစဉ် Pensamiento Positivo သည်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောစကားစုများစွာနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထားရစ်ခဲ့သည်။ ဒီမှာငါ ၄၀ ကိုပြုစုခဲ့တယ်။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်အများဆုံးတွေးခေါ်မှုနှင့်ထင်ဟပ်ချက် ၅၀ ကိုမကြည့်ခင်၊ ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ...
Salvador Dalí: စကားစုများနှင့်သိချင်စိတ်များ
ဒီနေ့မှာဆာဗေးဒေါဒီးလီ၊ အတ္တလန္တိတ်ကက်သလစ်ပန်းချီဆရာ၊ ပန်းပုဆရာနှင့်စာရေးဆရာမွေးဖွားသည်။ သူ့အကြောင်းသိချင်စိတ် ၅ ခုနှင့်သူ၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၇ ခုကိုဤနေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဝီလျံရှိတ်စပီးယား၏စာပိုဒ်တိုများနှင့် ၆ ချက်
ဝီလျံရှိတ်စပီးယားသည်စာပေသမိုင်းတွင်အရေးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူကြိုက်နှစ်သက်သောလိမ္မာပါးနပ်သောစကားစုများစွာဖြင့်သူ့ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။